हास्य कलाकार कपिलले खोले सुनील ग्रोवरसँगको फाटोको राज !! - inaruwaonline.com
हास्य कलाकार कपिलले खोले सुनील ग्रोवरसँगको फाटोको राज !!
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र २०, २०७५ समय: २०:०२:५७
आफ्नो कमेडी यात्राको १२ सालमा कपिल शर्मा शोका उधघोसक एबं हास्य कलाकारले निकै ठुला उतार चडाब भोगे संगै ३१ बर्षे कपिलले आफ्नो सहकर्मी साथी सुनिल ग्रोभरसंगको फाटो समेत झेले। उनिहरु विच एकाएक फाटो आयो तर न कपिल न सुनिलले आफ्नो मुख खोले। उक्त विषयमा कपिललाई विभिन्न भ्रामक कुराहरु सुनाइएको बताउछन। उनि भन्छन उनले सुनिललाई जुत्ताले हिर्काएका थिए। उक्त कुरा उनलाई अरु नै कसैले सुनाएको थियो। प्लेनमा उनिहरु विच के भयो भन्ने कुरा रहस्यमा वित्यो तर उक्त कुरालाई स्प्रस्ट पार्न दुबैले खोजेनन। उक्त घटना पश्चात शो बन्द भयो कपिल निकै चिन्तित बन्न पुगे साथै उनि डिप्रेसनमा पुगे। गोबरको साथ् साथै अन्य सहकर्मीले समेत शो छाडे।
दुई विच के भएको थियो भन्ने बारे हालै कपिलले सामाजिक संजालमा भएका विभिन्न भ्रामक अफबाह चले पछि मिडियालाइ कुरा खुलाएर बताए। उनले भने आफु सुनिलसंग कुनै तरिकाको रिस र रागमा नरहेको र आफु र सुनिलको एक आपसमा रहेको विश्वास निकै रहेको बताए। सामाजिक संजालमा भनिएका विभिन्न कुराहरु बनावटी रहेको समेत बताए। कपिलले सुनिललाई शोमा फर्किन समेत आग्रह गरे तर मानेनन् र कपिल भन्छन सायद सुनिल आफुसंग काम गर्न रहर राख्दैनन्।
सुनिलसंग आफ्नो सम्बन्ध रहेको र गफ चलिरहेको बताउछन। साथै कपिलले सुनिल निकै राम्रो कलाकार रहेको र आफुलाई मन पर्ने समेत बताउछन्। कपिल हाल विवाह बन्धनमा बाधिएका छन्, विवाह पश्चात सुनिलले समेत विहेको बधाई दिएका थिए। तर कपिल शर्मा शो पुन सुचारु रहयो भने सुनिल ग्रोबर फर्किने कुरा चर्चामा मात्रै रहयो।
अनिश्चित बनेको दशैं साँझ संचालनमा आउने
अनिश्चित बनेको मेघा रिदम इभ नामक सांगितिक कार्यक्रम अन्ततः आयोजना हुने भएको छ । विगत ७ वर्षयता दशैंको फुलपातीको अवसर पार...
काठमाडौं । ‘मिस नेपाल २०१९’ को उपाधि अनुष्का श्रेष्ठले जितेकी छन् । कीर्तिपुरस्थित ल्याब्रोटरी स्कुल प्रांगणमा बिहीबार भ...
डिथ्री अनलाईनको पहिलो वार्षिकोत्सब सम्पन्न (भिडियो)
ईटहरी/ मोफसल ईटहरीबाट संचालित पुर्वको कला र मनोरञ्जनको एक मात्र डिजिटल मिडियाको रुपमा परिचीत डिथ्री अनलाइनले औपचारिकताको...
मिर्चैया फेशन शो एण्ड म्युजिकल ईभेन्टको पहिलो अडिसन सम्पन्न
सिरहा। सिरहाको मिर्चैयामा पहिलो पटक हुन लागेको फेशन फेस्ट शो एण्ड म्युजिकल ईभेन्टको पहिलो अडिसन सम्पन्न भएको छ । एल एण्ड...
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी द्धय सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ ले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ...